Nyocha nke Ndị Filipaị Isi nke 2 - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Nyocha nke Ndị Filipaị Isi nke 2
Gịnị bụ okwu?
Lelee ESV-Greek Interlinear
Na -akọwapụta ihe adịghị mma na ESV
Ịkwado okwu e ji mee ihe
Ọ dị iche na Adam
Nhota sitere na ndị mmụta Bible Atọ n'Ime Otu
Nsụgharị Bekee ka mma nke Phil 2: 6-7
Echiche na -ezighị ezi na echiche na -ezighị ezi
Nsụgharị Bekee ka njọ nke Phil 2: 6-7
Isiokwu nke Ndị Filipaị 2 bụ “inwe uche nke Kraịst.” (Ndị Filipaị 2: 5). N'amaokwu 6-11 e nyere ọgbụgba-ama nke Jisus Kraịst dịka isi ihe atụ nke ịdị umeala n'obi na nrubeisi anyị kwesịrị inwe. A kwusikwara ike, bụ ụgwọ ọrụ nke Jizọs nwetara site n'ije ozi achọghị ọdịmma onwe onye na nrube isi (Ndị Filipaị 2: 8-11). Agbanyeghị, ejirila Phil 2: 6-7 mee ihe dị ka ederede akaebe maka ndị na-akwado nkuzi nke ịbịanye aka. Nke a bụ n'ihi na a na-atụgharịkarị amaokwu nke 6-7 na mkparị ọdịnala nke na-eme ajọ mbunobi ka ọ gụọ agụba n'ime ebe. Agbanyeghị, amaokwu a anaghị akụzi na Jizọs bụ Chukwu wee bụrụ mmadụ. Ka anyị bido site na ilele ụdị ESV a ma ama.
(Ndị Filipaị 2: 1-18)
1 Yabụ ọ bụrụ na enwere agbamume ọ bụla ke Christ, nkasi obi ọ bụla sitere n'ịhụnanya, ikere òkè ọ bụla na Mmụọ Nsọ, mmetụta ọmịiko na ọmịiko ọ bụla, 2 mezuo ọ joyụ m site n'ịdị ndị nwere otu uche, nwee otu ịhụnanya, nwee otu obi na otu uche. 3 Emela ihe ọ bụla site n'ọchịchọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye ma ọ bụ mpako, mana jiri ịdị umeala n'obi gụọ ndị ọzọ dị mkpa karịa onwe gị. 4 Ka onye ọ bụla n'ime unu ghara ilekwasị anya naanị n'ọdịmma nke onwe ya, kamakwa n'ọdịmma nke ndị ọzọ. 5 Nwenwe uche a n'etiti onwe -unu, nke bụ nke unu n'ime Kraịst Jizọs, 6 onye, ​​ọ bụ ezie na ọ dị n’ụdị Chineke, agụghị ịha nhata na Chineke ihe a ga-ejide n’aka, 7 ma mere onwe ya ihe efu, site n'iwere ọdịdị ohu, a mụrụ m n'oyiyi mmadụ. 8 na ebe a hụrụ ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe. 9 Ya mere Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nyekwa ya aha dị elu karịa aha ọ bụla, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna otuto.
12 Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dịka ị na -eme mgbe niile rubere isi, ugbu a, ọ bụghị naanị dị ka ọnụnọ m mana ọtụtụ ihe mgbe m na -anọghị, jiri egwu na ịma jijiji rụpụta nzọpụta nke onwe unu, 13 n'ihi na ọ bụ Chineke na -arụ ọrụ n'ime unu, ma ị na -achọ ma na -arụ ọrụ maka ihe dị ya ụtọ. 14 Na -eme ihe niile na -enweghị ntamu ma ọ bụ na -ese okwu, 15 ka unu we buru ndi zuru okè na ndi n innocentmeghi ihe ọjọ, ụmụ Chineke na -enweghị mmerụ n'etiti ọgbọ gbagọrọ agbagọ na nke gbagọrọ agbagọ, n'etiti ndị ị na -enwu dị ka ọkụ n'ụwa, 16 jidesie okwu nke ndụ ike, ka m wee nwee ike nganga n'ụbọchị nke Kraịst na agbaghị m ọsọ n'efu ma ọ bụ dọgbuo onwe m n'ọrụ n'efu. 17 Ọ bụrụgodị na a ga -awụpụ m dị ka ihe ọ drinkụ uponụ n'elu onyinye ịchụ aja nke okwukwe unu, A Iụrị m ọ andụ, mụ na unu niile. 18 Kpasụk ntre, mbufo ẹkpenyene ndidat esịt nnyụn̄ ntiene mi.
Ntụgharị asụsụ dị na ESV dị n'elu na -enye ike nke na -egosi etu akụkụ Akwụkwọ Nsọ a siri dị omimi n'ịkwado ozi ịdị umeala n'obi na nrube isi - inwe otu uche ahụ Kraịst nwere. Ihe iseokwu a bụ na agbakwunyere n'ime akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ntụgharị ọdịnala nke Akwụkwọ Nsọ iji zipu ozi nke mmadụ. Isi okwu bụ Phil 2: 6-7 nke eji aghụghọ tugharia ịghọta na Jizọs buru ụzọ n'ụdị Chineke wee bụrụ mmadụ. Nke a abụghị ihe Grik na -ekwu.
Ndị ọkà mmụta Akwụkwọ Nsọ ghọtara amaokwu a dị ka uri nke nwere ike yie nke Aịsaịa 53 metụtara ohu na -ata ahụhụ. Ezubeghị ya ka ọ bụrụ akwụkwọ nkà mmụta okpukpe. Ihe gbara ya gburugburu na -enwe uche nke Jizọs, bụ́ Mesaya. Isiokwu a abụghị maka mgbanwe nke ọdịdị Jizọs ma ọ bụ ọdịdị ya. Ọ dịghịkwa ekwu banyere oge tupu Jizọs bụ mmadụ.
N'okpuru bụ mpempe nke ESV-Greek interlinear maka Phil 2: 6-7. Achọpụtara mkpụrụokwu dị mkpa na igbe nwere agba nwere nkọwa na nkọwa enyere n'ime igbe kwekọrọ n'okpuru.
Na inyocha eserese a, mmadụ kwesịrị ịmara na μορφῇ, (morphē) nke a sụgharịrị “ụdị” pụtara ọdịdị elu ebe σχήματι (schēma) sụgharịrị “ụdị” metụtara ihe ihe gụnyere akụkụ arụ ọrụ nke ihe. N'ihi na a tụgharịrị okwu Grik abụọ a dị ka “ụdị” na ESV, ọdịiche ahụ dị na Grik furu efu.
Mmadu kwesịkwara rịba ama na ὑπάρχων (hyparchō) nke a sụgharịrị ịbụ “n'agbanyeghị na ọ nọ” na ESV, nọ n'ọrụ ugbu a pụtara "ọ dị" ma ọ bụ "o nwere" (ọ bụghị na ọ bụ ").
Enyere ntụgharị ESV nke Phil 2: 6-7 n'okpuru yana edepụtara okwu gbasara akụkụ amaokwu ndị ekwusiri ike.
(Ndị Filipaị 2: 6-8)
6 WHO, n'agbanyeghị na ọ nọ n'ụdị Chineke, agụtaghị ịha nhata na Chineke dị ka ihe a ga -aghọta, 7 mana o mere onwe ya ihe efu, site n'iwere ọdịdị nke odibo, ịbụ amụrụ n'oyiyi mmadụ. 8 Na -achọta ya n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site n'irube isi ruo ọnwụ, ọbụna ọnwụ n'elu obe.
Esemokwu #1: "n'agbanyeghị na ọ nọ n'ụdị Chineke"
Ngwaa Grik hyparcho sụgharịrị ka “ọ nọ” ebe a. Ngwaa Grik dị na olu nọ ugbu a (ọ bụghị onye aorist) nke pụtara “ọ dị” ma ọ bụ “o nwere” kama “ọ nọ”. Ya bụ, Jizọs bụ ugbu a in ọdịdị nke Chineke - Ọ bụghị na ọ nọ n'ụdị Chineke tupu e kee ya n'oyiyi mmadụ. Akụkụ mbụ nke Phil 2: 6 na -ekwu maka ọnọdụ ugbu a nke ịnọ ugbu a na ụdị nke Chineke ka ebuliri elu wee nye ya aha karịa aha niile (Ndị Filipaị 2: 9-11). Nsụgharị ụfọdụ sụgharịrị nke a dị ka “ịdị n'ụdị Chineke” nke ziri ezi karịa “ọ dị adị”
Okwu a bụ "n'agbanyeghị" adịghị n'asụsụ Grik ma bụrụ njikọta mmekọrịta. Interpolation bụ ihe ọhụrụ ma ọ bụ okwu efu etinyere n'ime ederede. N'ọnọdụ a, a na -eji ya emegbu onye na -agụ ya iji nye echiche na nkwupụta ahụ ga -adị iche ihe na -esote n'amaokwu nke 6 "agụtaghị ịha nhata na Chineke ihe a ga -aghọta." Itinye okwu a “ọ bụ ezie” na “ọ nọ” bụ mkpebi ntụgharị okwu na -adịghị mma nke gafere ihe ederede n'ezie na -enye.
Esemokwu #2, “site n'iji ọdịdị onye ohu”
Enweghị okwu "site" n'asụsụ Grik. Ndị ntụgharị okwu gbakwunyere nke a iji gosi na Jizọs mere mkpebi ịbụ nwoke. “Site” na nke a na ntinye ntụgharị okwu ọzọ (ihe ọhụrụ ma ọ bụ nke na -abụghị eziokwu etinyere n'ime ederede).
Esemokwu #3, "amụrụ n'oyiyi mmadụ"
Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ 'amụrụ' bụ γενόμενος (ginomai) pụtara ịbụ, bụrụ, mee; ibilite, mụọ. A na -apụta ihe izugbe pụtara na -enweghị nrụtụ aka ọ bụla n'ụdị ịdị adị ọ bụla.
Esemokwu #4, “n'ụdị mmadụ”
Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ “ụdị” ebe a bụ ihe ihe karịa ihe yiri ka ọ dị. Nke ahụ bụ, Jizọs bụ nwoke n'ụdị na ọ bụghị naanị n'ọdịdị. ESV tụgharịrị ma okwu Grik moaphe na atụmatụ dị ka “ụdị” mana okwu Grik ndị a nwere nkọwa dị iche. Atụmatụ dabara na ihe ihe gụnyere akụkụ ọrụ nke ihe (BDAG) karịa ọdịdị elu ahụ (morphe). Nsụgharị Bekee na -agbagha moaphe “Ụdị” (ihe nwere ike ịdị ka ọ dị n'ile anya) atụmatụ “Ụdị” (otu ihe dị na mejupụtara ya). Ịtụgharị okwu abụọ a n'ụdị n'asụsụ Bekee na -ekpuchi ihe dị iche. Iji jigide ọdịiche dị n'asụsụ Grik ọ ga -abụ ihe ziri ezi ịsụgharị moaphe dị ka “ngosi” ma ọ bụ “ọdịdị” na atụmatụ dị ka "ejiji" ma ọ bụ "edemede" (ontology). Ya bụ, Jizọs nọ ná ngosipụta nke Chineke ma e mere ya dị ka mmadụ mere.
Ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ntụgharị asụsụ Bekee dị mma karịa ndị ọzọ, a na -atụgharị ha niile na enweghị mmasị iji gosi nnabata. N'okpuru ebe a bụ ederede Grik maka Phil 2: 5-11 sochiri ya na ntụgharị ntụgharị site na tebụl interlinear zuru ezu ebe a: Interlinear
Okwu Grik Χριστῷ (Christo) n'olu dative nke pụtara na onye e tere mmanụ. Ndị e tere mmanụ otu okwu Grik maka Mesaịa nke mmadụ (Lee Jọn 1:41). Onye e tere mmanụ bụ nwoke ahụ (Nwa nke mmadụ) nke Chineke họpụtara ikpe ụwa ikpe n'ezi omume (Ọrụ 17:31).
Okwu a ebe a ὑπάρχων (hyparchōn) nwekwara ike ighọta dị ka ọ dị nakwa ka ọ dị na ya. Nke ahụ bụ Jizọs nwere ọdịdị / aha Chineke. Inwe aha Chineke abụghị ikwu otu ihe dị ka ịbụ Chineke dị iche iche. Amaokwu ndị na-esonụ bụ ihe atụ nke ngwaa ahụ hyparcho na-ezo aka n’inwe ihe dị ka Ọrụ 3:6 gbara: “Enweghị m (hyparcho) ọ dịghị ọlaọcha na ọlaedo” na 2 Pita 1:8 “N’ihi na ọ bụrụ na àgwà ndị a bụ nke gị (hyparcho).” N’otu aka ahụ, aha ahụ hyparchonta na-ezo aka n’ihe onwunwe (Lee Mat 24:47, Mat 25:14, Luk 11:21, Luk 12:33, Luk 12:44, Luk 14:33, Luk 16:1, Luk 19:8 , Luk 1:13 ; 3 Kọr 10:34 na Hib XNUMX:XNUMX.)
Ọzọ, onye otu hyparchon bụ onye nọ n'ọrụ ugbu a. Enwere ike iji onye na -arụ ọrụ ugbu a na -ezo aka na ihe gara aga ma ọ bụrụ na ngwaa bụ isi oge gara aga na -ezo aka na ihe omume gara aga. Agbanyeghị, ndị na -eso ụzọ adịchaghị mkpa na ngwaa bụ isi. Ihe gbara amaokwu a na -egosi n'ụzọ doro anya na ugbu a enyela Jizọs ngosipụta nke Chukwu n'ihi na o buru ụzọ were ngosipụta nke ohu wee jiri obi umeala rubere Chineke ya isi ruo ọnwụ.
Iche na Jizọs bụ Chukwu n'echiche nke mmụọ, dị ka ndị na -akwado Atọ n'Ime Otu kwenyere, ọ baghị uru ọ bụla na ọ ga -adị mkpa ka Pọl gwa anyị Chineke Ọkpara ahụ ewereghị ịpụnara ihe ka ya na Chineke. Kama ọ bụrụ na ịdị ma ọ bụ inwe ọdịdị/ọdịdị Chineke na -ezo aka na Jizọs ahụ dị elu ma nye ya otuto, ihe niile Pọl kwuru nwere ezi uche yana ọ dabara nke ọma n'okwu mmechi Pọl n'amaokwu 9 ruo 11 ebe ọ kọwara na Chineke buliri Jizọs elu nke ukwuu nsụhọdeidem nsụkibuot. Nke ahụ bụ Jizọs, onye nọ ugbu a n'ụdị nke Chineke, ewereghị nha nha anya ya na Chineke dị ka ihe ọ ga -ebukọrọ n'onwe ya.
Okwu Grik e jiri mee ihe μορφῇ (morphē) pụtara ọdịdị, ọdịdị elu ahụ, ọdịdị. “Nkọwapụta”, nke pụtara ihe na -egosipụta, na -egosipụta, ma ọ bụ na -egosipụta ihe ọzọ (Merriam Webster) dabara nkọwa a nke ọma. “Ụdị” bụ nhọrọ dabara adaba n'ihi na ọdịiche dị na ihe ụfọdụ na ihe yiri ka ọ na -efu. Kama moaphe na -eburu echiche ọnọdụ na ọnọdụ dịka Tobit 1:13 nke LXX (“ọkwa”). Ntụnyere na moaphe nke odibo ”(v.7) na -enyere anyị aka ịghọta moaphe dị ka e si eji ya na amaokwu a dị ka ọkwa, ọnọdụ ma ọ bụ ọkwa. N'asụsụ Bekee, a na -eji “ụdị” na “ọkwa” eme ihe dịka enwere ike ikwu maka mmadụ ịnọ “n'ụdị” ma ọ bụ “ọdịdị.”
Site n'ihe odide ụwa, anyị na -amụta na ndị Gris jiri ya mee ihe morphe ịkọwa mgbe chi dị iche iche gbanwere ọdịdị ha. Kittel (TDNT) na -akọwapụta na na akụkọ ifo ndị ọgọ mmụọ, chi na -agbanwe ọdịdị ha (morphe), na ọkachasị kwuru Aphrodite, Demeter na Dionysus dị ka mmadụ atọ mere. Nke a doro anya bụ mgbanwe nke ọdịdị, ọ bụghị ọdịdị. Josephus, onye ya na ndịozi dịkọrọ ndụ, jiri ya mee ihe morphe ịkọwa udi akpụrụ akpụ (Akwụkwọ akụkọ Bauer).
Akụrụngwa ndị ọzọ morphe n'ime Bible na -akwado ọnọdụ ahụ morphe na -ezo aka n'ọdịdị elu ahụ. Oziọma Mak nwere mkpirikpi aka na akụkọ ama ama na Luk 24: 13-33 gbasara Jizọs pụtara n'ihu mmadụ abụọ ahụ n'ụzọ Emmaus. Mark na -agwa anyị na Jizọs pụtara “n'ụdị ọzọ (morphe) ”Nye mmadụ abụọ a ka ha ghara ịmata ya (Mak 16:12). Ọ bụ ezie na akụkụ Mak ahụ abụghị nke mbụ, ọ na -egosi na ndị oge ahụ jiri okwu ahụ mee ihe morphe izo aka n 'odidi madu. O doro anya na Jizọs enweghị “ọdịdị dị mkpa” dị iche mgbe ọ pụtara n'ihu ndị na -eso ụzọ abụọ ahụ, naanị na ọ nwere ọdịdị elu ahụ dị iche. Ndị Juu na -atụgharị asụsụ Septuagint -ABỤ morphe ọtụtụ ugboro, ọ na -ezokwa aka n'ọdịdị elu ahụ mgbe niile.
O doro anya na morphe anaghị ekwu maka ọdịdị dị mkpa nke Kraịst dịka ụfọdụ nsụgharị na -anwa ime ka ọ dị. Kedu ihe bụ na ọ bụrụ na isi ihe dị n'amaokwu a bụ ịsị na Jizọs bụ Chineke, gịnị kpatara na ị gaghị ekwu ya? Ọ bụrụ na Jizọs bụ Chukwu, kwuo ya, ekwula na o nwere “ọdịdị dị mkpa nke Chukwu”. N'ezie Chineke nwere “ọdịdị dị mkpa” nke Chineke, yabụ gịnị kpatara na mmadụ ọ bụla ga -eme na rụtụ aka? Amaokwu a ekwughị, "Jizọs, bụrụ Chukwu," kama ọ na -ekwu, "ịdị n'ụdị Chineke." Ọ bụ n'otu echiche ahụ ka Jizọs bụ moaphe nke odibo- ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke aha ahụ. N'ihi ya moaphe abụghị nhazi ọkwa nke ihe mmadụ nọ n'echiche nke mmụọ (n'ime onwe ha).
"Ọ bụghị itinye ego"
Okwu Grik ἁρπαγμὸν (harpagmon) bụ ihe ike n'ike ihe onwunwe, izu ohi; ihe mmadụ nwere ike ịzọrọ ma ọ bụ kwupụta aha ya site na ijide ma ọ bụ ijide ya; ihe a na -ekwu. Nke ahụ bụ inwe ngosipụta nke Chineke, abụghị ihe Jizọs wepụtara n'onwe ya n'ụzọ na -ezighi ezi. Anyị na -ahụ n'amaokwu 9 na ọ bụ Chineke n'onwe ya buliri Jizọs Kraịst.
Mgbe o kwusịrị na Kraịst nọ n'ụdị Chineke, Ndị Filipaị 2: 6 gara n'ihu na -ekwu na Kraịst “lere anya ka ya na Chineke hara nhata ọ bụghị ihe ọ bụla. na- jidere. ” A tụgharịrị n'ụzọ ahụ, ahịrịokwu ahụ bụ arụmụka siri ike megide Atọ n'Ime Otu. Ọ bụrụ na Jizọs bụ Chukwu, ọ gaghị enwe isi ma ọlị ikwu na '' ọ ghọtaghị '' nha anya ya na Chineke n'ihi na onweghị onye na -ejigide nha anya ya. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na Chineke ahaghị nhata.
"O kwuru n'onwe ya"
Okwu Grik ἡγήσατο (hēgeomato) pụtara ịnọ n'onye nlekọta, iduzi, nduzi; itinye aka na usoro ọgụgụ isi, chee echiche, tụlee, ịkwanyere ya ùgwù. Grik nọ n'olu aorist na -egosi oge gara aga yana na ọ bụ isiokwu na ihe ngwaa bụ "o kwuru onwe ya".
Okwu Grik ἴσα (isa) pụtara nha, otu; na nkwekọrịta. Ihe nnọchite anya (1) bụ ụlọ ọrụ, ọrụ, ma ọ bụ ọfịs onye nnọchi anya na -anọchite anya onye ọzọ yana (2) ikike ma ọ bụ ike ime onye ọzọ yana (3) onye enyere ikike ime onye ọzọ (Merriam Webster) n'ịntanetị). N'iburu n'uche ọnọdụ nke “proxy” bụ nhọrọ dabara adaba.
"Ọ gwaghị onwe ya"
Okwu Grik ἐκένωσεν (kenoō) pụtara itufu ihe, ịnapụ ihe; (gafere.) ịbụ oghere, ihe tọgbọ chakoo, enweghị uru ọ bụla. Nke a na -enye echiche nke ịnapụ onwe gị ugwu (n'echiche nke ịtụ anya nnabata na ịbụ onye ndị ọzọ ji kpọrọ ihe). Nke a bụ mgbe niile na Aịsaịa.
"Okwu nwa odibo ọ nabatara"
Otu okwu Grik ahụ moaphe na -eji ebe a dịka ejiri ya mee ihe banyere ọnụnọ Jizọs nọ ugbu a moaphe nke Chineke n'amaokwu 6. O doro anya site n'okwu ndị a dị iche ọla na moaphe metụtara ọdịdị elu ahụ, ngosipụta, ọrụ, ma ọ bụ ọkwa dị iche na ọdịdị ma ọ bụ ontology dị mkpa. Ihe ọ pụtara bụ na ịnọ n'ime moaphe nke Chineke abụghị ịbụ Chineke n'echiche nke mmụọ kama o nwere ngosipụta ma ọ bụ ọrụ nke Chineke (site n'ike nke Chineke nyere ya).
Nabata moaphe nke odibo apụtaghị na ọ bụ Chukwu wee bụrụ mmadụ. Kama nke ahụ, dịka mmadụ, ọ nabatara ọrụ ya nke ịbụ odibo ma nye onwe ya dịka onyinye maka mmadụ niile. Enweghi ihe pụtara ịdị adị na akụkụ akwụkwọ nsọ a, naanị na ịbụ onye e mere ka ọ nọrọ n'ọnọdụ nke ịdị adị, ọ bụ nwoke nyefere onwe ya n'okpuru uche Chineke dịka onye na -ejere Chineke ozi. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na -akụziri anyị inwe otu uche.
“N'ọdịmma mmadụ ka e mere ya”
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ịdị na -adị n'oyiyi mmadụ pụtara na ọ bụghị na mbụ n'ọdịdị mmadụ, ya bụ, ọ bụghị mmadụ. N'uche Atọ n'Ime Otu, ihe niile gbasara ihe n'ihi na nke ahụ bụ nkuzi ọ chọrọ ịhụ n'amaokwu a. Agbanyeghị, ọ bụ ọrụ yana ihe Pọl na -ekwu maka ya - ihe Jizọs mere, ka ndị Filipaị mara ka esi eso nzọ ụkwụ Jizọs. Okwu Grik ụmụ nwanyị a na -ejikwa ya na iku ume na -esote mgbe ọ sịrị na Jizọs “ghọrọ” irube isi ruo ọnwụ. Ịdị ka oyiyi mmadụ abụghị ụzọ isi gwa anyị onye na-abụghị mmadụ ghọrọ mmadụ. Ọ bụ ụzọ isi agwa anyị na Jizọs mere onwe ya dịka mmadụ dị umeala karịa ịbụ chi dị elu. O weere ọdịdị nke onye ozi na okwu "n'ọdịdị nke mmadụ" na -eme ka anyị mata ihe ụdị ịse ohu pụtara.
"na ejiji (nhazi)"
Okwu Grik σχήματι (schēmati) bụ ọnọdụ ma ọ bụ ụdị ihe a na -ahụkarị; akụkụ arụ ọrụ nke ihe dị ka akwụkwọ ọkọwa okwu BDAG kacha akwanyere ùgwù. A na -akọwa ihe mejupụtara dịka ụzọ e si eme ihe; etemeete izugbe (Merriam Webster) na -enye nkọwa a nke ọma.
“A matara ya”
Okwu Grik εὑρεθεὶς (heuritheis) dị n'olu dara ụda nke pụtara "ka achọta ya." Iji “mata” pụtara ihe ọ pụtara: ịnakwere ma ọ bụ rịba ama n'ụzọ ụfọdụ (Merriam Webster).
“Ikike karịrị ikike niile”
Okwu Grik a sụgharịrị ịbụ "ikike" bụ ὄνομα (onoma) nke pụtara aha; aha; aha. N'ọnọdụ a, ọ na -ezo aka n'ikike ebe a kọwara Jizọs dị ka Onyenwe anyị Mesaịa.
Jizọs aghọtachaghị otú ọ dị Adam. A gbanwere mmehie Adam n'ime Jizọs. Dr. Colin Brown na Fuller Seminary kwuru na Phil. 2 abụghị maka ịdị adị na ịdị adị, mana maka ọdịiche dị n'etiti Kraịst na Adam. Adam bụ nwoke mbụ emere n'onyinyo Chineke, na -achọ n'efu ka ọ dị ka Chineke. Mana Jizọs mere ihe megidere nke a irube isi ruo ọnwụ - ọbụlagodi n'elu obe. (Ernst Lohmeyer's Kyrious Jesus Revisited) Leekwa Dr. James Dunn, Christology na -eme. Onye nkuzi ama ama FF Bruce kwukwara na ya echeghị na Pọl kwenyere na Ọkpara dịbu adị (Otu Chineke, Nna, Nwoke Otu Mesaya, Mbipụta nke abụọ, p. 2, Anthony Buzzard, mkpakọrịta mweghachi)
James Dunn (Ọka mmụta usoro NT) p115. Christology n'ime ime
"Ọzọkwa, enwere ike ịhụ ngwa ngwa na ndepụta echiche dị n'abụ Filipaị kwekọrọ n'ụzọ zuru oke na usoro ọmụmụ Christology nke pụtara ebe ọzọ na Iso Ụzọ Kraịst nke mbụ. - nnwere onwe n'efu nke mmadụ sochiri ruo ọnwụ, na mbuli elu ruo n'ọkwa Onyenwe anyị n'ihe niile."
JAT Robinson (Ọkà mmụta Anglican NT), p166 “Ihu Mmadụ nke Chineke”
Foto a abụghị nke onye elu -igwe na -ewedata onwe ya ka ọ bụrụ mmadụ, ka ebuli ya elu ka ọ dị elu karịa ka ọ dị na mbụ. Kama nke ahụ, ọ bụ na e mere ka izu ezu nke Chineke niile… chọta ụdị onye ọ bụ n'ime anyị kpamkpam dị ka ụmụ Abraham ọ bụla ọzọ. ”
Jerome Murphy-O'Connor (Onye Ọkammụta NT Katọlik)
“N'enweghi ike, ndị na -amalite ịkọwa nkọwa nke abụ a na -eche na ọ gbasara otu Chukwu dịbu adị na -eche maka nkọwa docetic (gnostic) nke usoro ndị a. ”
James P. Mackey (Ọkà mmụta okpukpe Katọlik). p52 "ahụmahụ Ndị Kraịst nwere na Chineke dị ka Atọ n'Ime Otu"
“Eziokwu ahụ bụ na okirikiri nke ukwe dị n'akwụkwọ ozi n'ezie enweghị aha ọ bụla gbasara onye mmụọ a na -amaghị aha nke na -aghọ mmadụ… ”
Karl-Josef Kuschel (Ọkà mmụta okpukpe German) p250 “A Mụrụ Tupu Oge Nile”
"Site n'eziokwu a na ndị Juu kama imekọ ihe ọnụ nke ndị Gris nwere ike bụrụ igodo ịghọta abụ Filipaị, Ndị nkuzi nke oge a ewepụtala nkwubi okwu dị oke iche na ukwe ndị Filipaị anaghị ekwu maka ịdị adị nke Kraịst ma ọlị.. "
Anton Vogtle (Ọkà mmụta NT German Katọlik) Freiburg exegete
"Onweghi ịdị adị nke Kraịst tupu ụwa nwere ihe nweere onwe ya nke a ga-amata ọbụna na Filipaị. 2. "
Klaus Berger (Ọka mmụta NT German Katọlik) Heidelberg kwuru
“Ndị Filipaị 2: 6 na -echekarị banyere ikwu okwu banyere ọkwá dị elu na ma ọlị na-echegbu onwe ya tupu ịdị adị. "
Bas van Iersel (Ọkà mmụta NT Dutch) p45. 'Okpara Chineke n'ime Testament Ọhụrụ'
"Mana maka ịdị adị na nha anya nke ịnọnyere Chineke anyị enweghị ike ịchọpụta akara ọ bụla n'akwụkwọ ozi Pọl"
Nke a bụ nlele nke ụfọdụ ntụgharị asụsụ Bekee ka mma nke na -adịchaghị njọ n'ịkwado onye na -agụ ya. A sụgharịrị ha ka ọ bụrụ n'ụzọ nkịtị mana mana ha na -ele mmadụ anya n'ihu pụtara ịbata mmadụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke egosipụtara na mkpụrụedemede, a sụgharịghị okwu n'ụzọ ziri ezi.
Ụdị nsụgharị nkịtị (LSV): who, ebe ọ nọ n'udi nke Chineke, o chere na ọ bụghị ihe a ga -ejide ka ya na Chineke, kama o mere onwe ya ihe efu, ebe o werela ụdị onye odibo, emechara ya n'oyiyi mmadụ.
Agụmakwụkwọ Berean (BSB): Onye dị n'ụdị Chineke, echeghị na ya na Chineke ịha nhata ka a ga -ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, were ụdị onye odibo, mee ya n'oyiyi mmadụ.
Nsụgharị Bekee (ERV): onye, ​​n'udi nke Chineke, agụghị ya dị ka ihe nrite na ya na Chineke ịha nhata, kama o mere onwe ya ihe efu, were ụdị onye na -eje ozi, bụrụ onye e mere n'oyiyi mmadụ.
Tyndale Bible nke 1526: Nke dị n'ụdị Chineke ma chee na ọ bụghị ịpụnara mmadụ ịha nhata na chi. Ma ọ bụghị ya, ọ mere ka ọ bụrụ onye na -enweghị aha ọ bụla wee were ya yiri onye na -eje ozi wee bụrụ mmasị ụmụ mmadụ.
Coverdale Bible nke 1535: nke na -adịnyere nppeomi nke Chineke, chere na ọ bụghị izu ohi ka ya na Chineke hà, kama o mere ya onwe ya na -enweghị aha ọma, ma were ya yie onye na -ejere ya ozi, dị ka ọzọ Nwoke
Bible ndị bishọp nke 1568 Onye na -anọ n'ime mmụọ nke anọ nke Chineke, chere na ọ bụghị izu ohi ka ya na Chineke hà. Kama emere onwe -ya aha efu, n himnye ya orù nke orù, we were ya n'ọmuma -madu.
Geneva Bible nke 1587: Onye ebe unu nọ n'obì nke Chineke, o cheghị na ọ dịghị ihe ohi n'ike ka mụ na Chineke hara. na udi dika nwoke.
Bible King James nke 1611 (Mb): Onye, n'udi nke Chineke, chere na ọ bụghị izu ohi ka ya na Chineke hà.
Nsụgharị nkịtị nke Young nke 1898 (YLT): onye, ​​n'udi nke Chineke, chere na ọ bụghị izu ohi ka ya na Chineke hà, kama o mere onwe ya ihe efu, yiri ụdị onye odibo were, n'oyiyi nke mmadụ.
Ụdị American Standard Version nke 1901 (ASV): Onye dị n'ụdị Chineke, ọ gụghị na ya na Chineke ịha nhata ka a ga -ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, were ụdị onye na -eje ozi, bụrụ onye e mere n'oyiyi mmadụ.
Bible Lamsa (Peshitta): Onye, n'udi nke Chineke, na -echeghị na ọ bụ ịpụnara ihe ka ya na Chineke hà: kama o mere onwe ya onye na -enweghị aha, werekwa ụdị onye odibo, wee dịrị n'oyiyi mmadụ.
Nke a bụ ndepụta echiche na echiche na-ezighi ezi banyere Phil 2: 5-7
Okwu a “dị” na-ekwu maka uche Kraịst na-akpachapụ anya onye na-agụ ya ka ọ were na Pọl na-ekwu maka oge gara aga ebe Jizọs nwere otu echiche na iche na Kraịst nwere echiche a tupu ọ ghọọ mmadụ.
Na-eche na Pọl na-ekwu maka Ọkpara nke na-enwetụbeghị anụ ahụ nke “dị” n'ụdị “Chineke.”
Iche na okwu a bụ “ọdịdị nke Chineke” pụtara “Chukwu” wee daa ịhụ na ọ baghị uru ịkọwa Chineke dị ka Chineke. Ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya ịkọwa onye ọzọ dị ka ọ dị n'onyinyo Chineke ma ọ bụ n'ọdịdị nke Chineke.
Na -eche na Jizọs mere onwe ya ihe ụfọdụ nke ikike Chineke ma ọ bụ ebube ọkwá ya n'eluigwe.
Iche na ịghara ile ya anya dị ka ihe nkwata ka ya na Chineke hara bụ na Jizọs enweghị nsogbu ịha nhata na Chineke. N'ikwu ya, nke a enweghị isi ọ bụla ebe ọ bụ na okwu Pọl bụ igosi ndị Filipaị ka ha ga -esi eweda onwe ha ala ma jee ozi dịka Jizọs jere ozi nye Chineke ya.
Na -ewere okwu Pọl ka ọ kwuo amaokwu nke 6 nke Jizọs leghaara anya 'ịrapara' n'iha nhata na Chineke. Kaosinadị, nke ahụ ga -apụta na Jizọs bụ anụ ahụ na -adịkwaghị nhata ya na Chineke nke ha na -agọnarị.
Na -ewere amaokwu nke 6 pụtara na Jizọs erigaghị, ma ọ bụ jiri ohere nha anya ya na Chineke mee ihe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na Jizọs enweworị a harpagmos kedu ebe okwu ndị dị n'amaokwu nke 6 na -ezo aka n'iji ya eme ihe? harpagmos ọ pụtaghị nrigbu. Ọ na -ezo aka n'ihe anapụnara/jidere maka onwe ya dị ka ihe nkwata.
Iche na “iwere ọdịdị onye odibo” pụtara “ịgbakwunye ọdịdị mmadụ” nye onwe ya. Okwu ndị a “na -adị n'oyiyi mmadụ,” ma ọ bụ 'ịdị na -adị n'oyiyi mmadụ' na -eme ka okwu ahụ bụ 'iwere ọdịdị nke onye odibo pụta.' N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na -eme ka ọdịdị mmadụ dị iche na ọdịdị nke Chineke. Okwu Grik ebe a na -ekwu na Jizọs bịara dịrị n'oyiyi mmadụ.
Nke a bụ nlele nke ụfọdụ ntụgharị asụsụ Bekee kacha njọ nke na -eme ajọ mbunobi n'ịgba onye na -agụ ya ume ọ bụghị naanị na ọ na -egosi na ọ bụ anụ ahụ kamakwa iji were ya. Ọdịnaya na -eduhie eduhie nke na -adabaghị n'echiche nkịtị nke ederede dị na mkpụrụedemede.
New International Version (NIV): Onye, ịnọ ọdịdị Chineke, ewereghị nha nhata ya na Chineke dị ka ihe jiri uru nke ya; kama, o mere onwe ya ihe ọ bụla by na-ewere ọdịdị nke orù, nke emere n'onyinyo madu.
New Living Translation (NLT): Ọ bụ ezie na he bụ Chineke, o cheghị na ịha nhata na Chineke dịka ihe ịrapara. Kama, ọ ọ hapụrụ ihe ùgwù Chineke ya ; o were ọnọdụ dị umeala n'obi nke ohu ma mụọ ya dị ka mmadụ. Mgbe ọ pụtara n'ụdị mmadụ,
Bible Nso (IGBOB): He nwere nha anya ya na Chineke mana o cheghị oke banyere onwe ya na ọ ghaghị ịrapara na uru nke ọkwa ahụ n'agbanyeghị ihe ọ bụla. Ọbụghị ncha ncha. Mgbe oge ruru, o wezugara onwe ya ihe ùgwù nke chi ma were ọnọdụ nke ịbụ ohu, ghọrọ mmadu!
Akwụkwọ Nsọ Ọhụrụ American Standard 2020 (NASB 2020): WHO, as He -ama dịrị n'ụdị Chineke, echeghị na nha anya na Chineke ihe a ga -ejide, kama ọ tọgbọrọ n'efu by na-ewere ụdị nke ohu na ịbụ amụrụ n'oyiyi mmadụ
Akwụkwọ Nsọ Ọhụrụ American Standard 1995 (NASB 95): Onye, ọ bụ ezie na ọ dịrị n'ụdị Chineke, ma o leghị nha anya ya na Chineke anya dị ka ihe a ga-ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, were ụdị onye ohu, bụrụkwa onye e mere n'oyiyi mmadụ.
Ụdị ntụgharị asụsụ Bekee (CVE): Kraịst bụ n'ezie Chineke. ma he anwala ịnọrọ ha na Chineke. Kama ọ hapụrụ ihe niile bya abụru ohu, mgbe ole he ghọrọ dị ka otu onye n’ime anyị.
Bible NET (NET): onye n'agbanyeghị he dị adị n'ụdị Chineke ewereghị ịha nhata na Chineke dịka ihe a ga -ejide, kama o mere onwe ya ihe efu by na -ewere ọdịdị nke ohu, by dị ka ọzọ ụmụ nwoke, na site n'ikekọrịta na ọdịdị mmadụ.
Revised Standard Version (RSV): WHO, n'agbanyeghị he bụ n'ụdị Chineke, agụtaghị ịha nhata na Chineke ka ihe a ga -ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, were ụdị onye ohu, a mụrụ ya oyiyi nke ụmụ nwoke.
New Revised Standard Version (NRSV): WHO, n'agbanyeghị he bụ n'ụdị Chineke, ewereghị ịha nhata na Chineke dị ka ihe a ga -erigbu, mana o mere onwe ya ihe efu, na -ewere ọdịdị nke ohu, na -amụ n'ọdịdị mmadụ. Na achọta ya na mmadụ ụdị,
Baịbụlụ Nsọ (BN): WHO, n'agbanyeghị he bụ n'ụdị Chineke, agụtaghị ịha nhata na Chineke dị ka ihe a ga -ejide, kama o mere onwe ya ihe efu, na -ewere ọdịdị nke ohu, ịbụ amuru n'oyiyi nke madu.
Bible ọkọlọtọ Ndị Kraịst (CSB): onye dị n'ụdị Chineke, na -ewereghị ịha nhata na Chineke dịka ihe a ga -erigbu. Ma o mere onwe ya ihe efu by na -ewere ọdịdị nke ohu na site n'ịghọ dị ka mmadụ. Mgbe ole ọ hụrụ onwe ya n'ụdị mmadụ,
Akwụkwọ nsọ ọkọlọtọ Holman Christian (HCSB): onye dị n'ụdị Chineke, na -ewereghị ịha nhata na Chineke dị ka ihe a ga -eji mee ihe maka ọdịmma nke ya. Kama O mere onwe ya ihe efu by na-eche udi nke orù, n takingwere oyiyi madu. Na mgbe Ọ bịara dị ka nwoke na mpụga Ya ụdị,
Ọtụtụ ntụgharị asụsụ Bekee nke Ndị Filipaị Isi nke 2, ọkachasị Ndị Filipaị 2: 6-7, na-egosipụta ajọ mbunobi ntụgharị uche iji gosipụta ịdị adị na ịdị adị. Agbanyeghị nyocha siri ike na -egosi na akụkụ Akwụkwọ Nsọ a anaghị akụzi n'ime mmadụ mana onye na -ekwu okwu na -agbagha ya na nkuzi nke Atọ n'Ime Otu. Ihe ekwuru n'atụghị egwu bụ na e buliri Jizọs elu ma nye ya ikike o nwere n'ihi nrubeisi ya ruo ọnwụ n'elu obe. Kama ịkọwa ihe dị n'anụ ahụ, akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na -akwado nghọta nke ịdị n'otu nke Chineke.
Ntụle nlebara anya na -egosi na Ndị Filipaị 2 anaghị akụzi n'anụ ahụ ma ọlị. O doro anya na ọ nweghị ụdị/ngosipụta nke Chineke ka ọ malite. Ọ bụ site na nrube isi nke nwoke ahụ bụ Jizọs Kraịst ka enyere ya ike na ikike ugbu a wee mee ya Onyenwe anyị Mesaya. Nke a kwekọrọ na mkpọsa nke Ọrụ Ndịozi 2:36: "Ya mere, ka ụlọ Izrel niile mara nke ọma na Chineke mere ya Onyenwe anyị na Kraịst (Mesaya), Jizọs nke a ị kpọgidere n'obe."
N'ịtụle ederede a nwere ike ịtụgharị ya n'ụzọ nke enweghị mmụọ nke pụtara, ọ bụ ihe ijuanya na akụkụ Akwụkwọ Nsọ a bụ ihe akaebe nye ọtụtụ Ndị Kraịst nwere echiche nke ịbanye n'anụ ahụ.
IWU NDỊ FILIPAI 2: 6-11 N ’OZI OZI:
A ỌGỤ ỌHỤRỤ CHRIST-HYMN NA ÌH OF
IHE ỌGWỤGWỤ ỌHA NA ỌTỤTỤ NDỊ FILIPI DỊ KA HA BỤ
Irube isi na ịdị umeala n'obi nke Adam nke Abụọ:
Ndị Filipaị 2: 6-11
Ndị Filipaị 2: 6-8